Kusvuta kunosvibisa nharaunda nekuwedzera kukuvadza hutano | Green Renewables
Adriana | | Imba yeGreen
El kusvuta Iyo tsika inokuvadza hutano asi zvakare ine kukanganisa kune iyo nzvimbo.
Fodya inogadzira kusvibiswa kwemuchadenga, kutemwa kwemasango, kuchinja kwemamiriro ekunze, kuraswa kwemarara nemoto wesango.
Mazuva ano mumaguta mazhinji mune zvirambidzo pakusvuta munzvimbo dzakapfigwa kuitira kuti vaputi vabude kunze vogadzira kubuda kwegasi uye zvinosvibisa zvinosvibisa kumhepo.
Gore rega rega zvinofungidzirwa kuti kutenderedza 4,5 trillion butts kana midzanga inogadzirwa mupasi. Aya mabute efodya anotora makore makumi maviri nemashanu kuti aore mune zvakatipoteredza.
Izvo zvakakosha zvikamu zve mudzanga iwo tara uye nicotine inogona kusvibisa anosvika makumi mashanu emalita emvura pamusoro pekuuraya hove, shiri uye mhuka dzinosangana neiyi yakasara.
Uye zvakare, hombe pepa rinoshandiswa kugadzira fodya nemapakeji.
ari moto wesango Ivo anowanzo kugadzirwa mune yakakura chikamu nemabutt akawanda anodzimwa. Asi zvakare inofarira kutemwa kwemasango sezvo masango akatemwa kuti arime fodya nekuda kwekuda kukuru kwechigadzirwa ichi mumusika.
Mukupedzisa, haina chete kukuvadza hutano hweanoputa, hwevanhu vakamukomberedza, asi zvakare inogadzira kana kuwedzera matambudziko epasi rese ezvakatipoteredza.
Kusvuta hachisi chiitiko chakazvimiririra chega chinongobata chero munhu anozviita, asi mhedzisiro yazvinoitika munzvimbo iyi inowedzera uye nevanhu vazhinji vanozviita, kwatove nemamiriyoni evanhu vanosvuta mazuva ese.
Kana isu tichifarira kutarisira nharaunda uye kubatana mukuvandudza hupenyu hwehupenyu pasirese, tinofanira kurega kuputa.
Indasitiri yefodya ndeimwe yakakosha pasi rose uye ndiyo inopinza zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana kuitira kuti fodya isarambidzwe, asi vari kubatsirwa nehutano hwevanhu pamwe nekunetsawo kwezvakatipoteredza.
Zvakaoma kurega kuputa asi iwe unogona kuyedza kuzviita kwete chete kune hutano hwedu uye hupenyu hwehupenyu asiwo kutarisira nharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Imba yeGreen » Kusvuta kunosvibisa nharaunda nekuwedzera kune kukuvadza hutano
mubvunzo: chigamba chemudzanga, mangani litita emvura anokwanisa kusvibisa?
Kusvika pamalita makumi mashanu kana kudarika
ine zvakashata zvakashata mazwi.
Uye kumedza mavhiri emagetsi akafanana nechinyorwa chino Zvakasvibisa zvakadii?
Mwari ngoni pavanhu! murume mumwe chete iyeye ari kuparadza zvakasikwa
Pindura ku jeannise
Izvo zvinonakidza kuti vangani vakapindwa muropa vasingakoshese nharaunda yangu sezvo ivo vachishandurwa uye kushandisirwa, havana basa kana zvichikuvadza imwe kana ichigadzira utsi hwezvakatipoteredza, hapana kana chakaipa, kana mumwe asina ruzivo, havana hanya uye ivo vanotora mukana wekusvibisa vakapindwa muropa nehuturu hwehupfu iwe zvaunofanira kurambidza uye kugadzirisa
Pindura kuna gonzalo
Izvo zvese zviri mukuziva kwemunhu wese… .. Asi zviri pachena kuti zvakafanana nekuedza kurega chikafu chinokurumidza. Ichi chinhu chiri pese pese uye chinopinda muKusaziva kwevanhu.
Shanduko yemamiriro ekunze iri kuparadza tii iri kurimwa muUganda